मानिसले कसरी आनन्दको मार्ग समात्न सक्छ? « Mero LifeStyle
कुनै विषयको दार्शनिक पक्ष र वैज्ञानिक पक्ष आफ्नो ठाउँमा छँदै छ, व्यवहारिक पक्षमा सुक्ष्मभन्दा सुक्ष्म कुरालाई कसरी बुझ्ने? कसरी अनुभूत गर्ने? भन्ने नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो। यसलाई सबैभन्दा विशिष्ट पक्षका रुपमा पनि लिने गरिएको पाइन्छ।
(योगगुरु ब्रह्मश्री मित्रसँगको कुराकानीमा आधारित)
किन आफूखुसी रुद्राक्षको माला लगाउनु हुँदैन ? « Mero LifeStyle